यो खण्डले आधारभूत LibreOffice सँग कार्य गर्नका लागि मुलभूत तत्व प्रदान गर्दछ ।
LibreOffice आधारभूत सङ्केत सब...सब अन्त्य गर्नुहोस् र प्रकार्य...प्रकार्य अन्त्य गर्नुहोस् सेक्सनहरूको बीचमा निर्दिष्ट गरिएको सबकार्यतालिकाहरू र प्रकार्यहरूमा आधारित हुन्छ । प्रत्येक सब वा प्रकार्यले अन्य सबहरू र प्रकार्यहरू बोलाउन सक्दछन् । यदि तपाईँले एउटा सब वा प्रकार्यका लागि जेनेरिक सङ्केत लेख्दा होशियारी अपनाउनुभयो भने, तपाईँले सम्भवत: यसलाई अन्य कार्यक्रमहरूमा पुन-प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।विधिहरू र प्रकार्यहरू पनि हेर्नुहोस् ।
सब के हो ?
उपकार्यतालिका को छोटो रुप सब हो, त्यो कार्यक्रम भित्र निश्चित कार्यको ह्यान्डल गर्नलाई प्रयोग गरिन्छ । सबहरूको व्यक्तिगत कार्य-विधिहरू भित्र कार्यलाई बिभाजन गर्न प्रयोग गरिन्छ । बिभाजित कार्यक्रम कार्य-विधिहरू र उप कार्य-विधिहरू पढ्नयोग्य हुनेगरी बढाउनु र घट्नसक्ने त्रुटिहरू घटाउनु गर्दछ । एउटा सब संभाव्यले परामितिको रूपमा कार्यहरूका केही तर्कहरू लिन्छ तर कलिङ्गि सब वा प्रकार्यलाई कुनै पनि मान पछाडि फर्काउँदैन । उदाहरणका लागि:
मानहरू सँग केही चिज गर्नुहोस् (मेरो पहिलो मान, मेरो दोस्रो मान)
प्रकार्य के हो ?
एउटाप्रकार्यसब लाई आवश्यकता पर्दछ, जसले मान फिर्ता गर्दछ । चल घोषणाको दायाँ भागमा प्रकार्य प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, उदाहरणका लागि, अर्को ठाउँ जहाँ तपाईँ साधारणतया मानहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ ।
मेरो दोस्रो मान = मेरो प्रकार्य (मेरो पहिलो मान)
विश्वव्यापी र स्थानिय चलहरू
मोड्युलको भित्र सबै सवहरू र प्रकार्यहरूका लागि विश्वव्यापी चलहरू वैध हुन्छन् । तिनीहरूले पहिलो सव वा प्रकार्य सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मोड्युलको सुरुमा घोषणा गर्दछन् ।
तपाईँले सब र प्रकार्यको भित्र घोषणा गर्नु चलहरू केबल सब वा प्रकार्य भित्र मात्रै वैध हुन्छ । ति चलहरूले उही नामसँग विश्वब्यापी चलहरू र सुपरवर्डिनेट सबहरू र प्रकार्यहरूबाट आउने उही नामसंगको स्थानिय चलहरू मिच्दछ ।
कार्य-विधिहरू र प्रकार्यहरू (सवहरू र प्रकार्यहरू) भित्र तपाईँको कार्यक्रम छुट्याए पछि, तपाईँले अर्को परियोजनाहरूमा पुन: प्रयोग गर्नका लागि ति कार्य-विधि र प्रकार्यहरू फाइलमा बचत गर्न सक्नुहुन्छ ।आधारभूत LibreOfficeले मोड्युलहरू र लाइब्रेरीहरू लाई समर्थन गर्दछ । सबहरू र प्रकार्यहरू प्रायजसो मोड्युलमा सूचीकृत भएका हुन्छन् । तपाईँ मोड्युलहरू विश्वव्यापी वा कागजातको एक भागको रूपमा परिभाषित गर्न सक्नुहुन्छ । बहु मोड्युलहरूले लाइब्रेरीलाई समायोजित गर्न सक्छन् ।
Macroसंवाद को प्रयोगले तपाईँ सब, प्रकार्य, मोड्युल र लाइब्रेरीलाई एउटा फाइलबाट अर्को फाइलमा नक्कल गर्न वा सार्न सक्नुहुन्छ ।
Title is: आधारहरू